जापानमा ६ लाख येनमा बिक्यो एउटै खरबुजा - Samudrapari.com
एजेन्सी । गर्मीयाममा चाहे केटाकेटी हुन् या बुढाबुढी खरबुजा मन नपराउने सायदै कोही होलान् । गर्मी भगाउने एक टुक्रा मात्रै भएपनि रसिलो खरबुजा खान कसलाई मन नपर्ला ? के तपाईलाई विश्वकै सबैभन्दा महँगो र दूर्लभ खरबुजाबारे थाहा छ ?
सन् २०१९ मा एउटै खरबुजाले ७ लाख ५० हजार येन पाएको थियो । यो अहिलेसम्मै देनसुके खरबुजाले पाएको अहिलेसम्मकै धेरै मूल्य हो । बजार प्रवर्द्धनका लागि जापानमा हरेक वर्ष मौसमको शुरुमा खरबुजा, हलुवावेद, च्याउलगायत फलफूल र तरकारीहरु यसैगरी ठूलो मूल्यमा लिलाम विक्री गर्ने गरिन्छ । विशेषगरी रेष्टुरा र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुले आफ्नो बजार प्रवर्द्धन गर्न ठूलो मूल्य तिरेर यस्ता लिलामीमा सहभागी हुने गर्दछन् । –आर्थिक अभियानबाट
प्रकाशित समय: १९:५२:०७